DAAWO VIDEO DEG DEG Xilka Qaadista Trump Gudi Ugu Danbeyey oo Saxeexay | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO VIDEO DEG DEG Xilka Qaadista Trump Gudi Ugu Danbeyey oo Saxeexay
Gudiga Wakiilada ee Dimuqraadiga ay maamusho Ayaa jimcihii Tageeray Kiiska Maxkamadaynta Donald Trump,waxayna qarka u saaran in la ceyriyo markii uu ogolaaday labo eedeymood oo isaga ka dhan ah dadaaladii uu ku cadaadinayay Ukraine inay baaraan ninka siyaasiga ah ee la tartamaya Joe Biden.
Guddi garsoor oo aad u kala qaybsan ayaa u codeeyay 23-17 si ay u ansixiyaan qodobbada eedaynta Ku Wajahan Trump iyada oo ay ku xadgudbayaan awoodda xafiiskiisa Ukraine iyo in ay horjoogsadaan isku dayga aqalka Senate-ka uu ku doonayo in lagu baaro.
Hada Waxa kaliya oo La Filaya Labada Aqal Inay Cod U Qaadan,Hadii Cod buuxa uu u codeeyo usbuuca soo socda si xilka looga qaado Trump, sida la filayo, Republican-ka ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka ee xilka laga qaado. Laakiin fursadaha ah in xilka laga xayuubiyo waxa Jira caqabado maxaa yeelay aqalka Senate-ka oo ay xukumaan Republicans, ayaa leh go’aanka kama dambaysta ah.
xisbiga Dimoqraadiga ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu khatar gelinayo dastuurka Mareykanka, inuu khatar gelinayo amniga qaranka isla markaana uu carqaladeynaayo sharafta doorashada 2020 iyagoo weydiistey madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy taleefanka Luulyo taleefanii Ay trump Ku wada Hadleen si uu u baaro Biden.
In kasta oo ay Dimuquraadiyiintu xukumaan Aqalka, Republicans-ku waxay leeyihiin 53 ka mid ah 100 kursi ee Senate-ka. Dimuqraadiyeyaashu waxay haystaan ​​45, waxayna sidoo kale ku xisaabtamayaan codadka laba Xildhibaan oo Ah Republican.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahnaan doonaan hab ay ku helaan 20 Senator Republicans ah si ay u taageeraan xukunku.
“Maanta waa maalin adag oo murugo leh,” ayuu yiri gudoomiyaha guddiga dimuqraadiga, Jerry Nadler, ayaa yiri. “Markii seddexaad wax ka yar qarni iyo badh, guddiga Garsoorka ee Golaha ayaa u codeeyay qodobbada xukunka ka qaadista madaxweynaha.”
Jamhuuriga ayaa difaacay Trump waxayna ku eedeeyeen xisbiga Dimoqraadiga dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku saleysan ujeeddadiisu ahayd inuu ka laabto guushii lama filaanka aheyd ee doorashadii madaxtinimada ee 2016.
“Waa wax laga xumaado, oo ceeb ku ah Golaha Wakiilada Mareykanka. Tani waxay u baahan tahay inay si dhakhso ah ku dhammaato, ”ayuu guddoomiyaha guddiga garsoorayaasha ee Senate-ka Lindsey Graham, oo u dhashay Republican-ka oo badanaa difaaca weyn u ah Trump, ku qoray Twitter.
Haddii xilka laga qaado, Trump wuxuu maxkamad ku tegi doonaa aqalka Senate horaanta sanadka dambe, iyadoo ololaha doorashada madaxtinimada ee 2020 uu Doonayey Inuu Ka Qeyb galo.
Biden, oo ah madaxweyne kuxigeenkii hore ee Mareykanka, ayaa ah musharrax u tartamaya Dimuqraadiga si uu uga hor tago Trump doorashada guud ee November. Trump ayaa ku eedeeyay in Biden uu ku lug lahaa musuqmaasuq ka dhacay Ukraine ayna tahay in la baaro laakiin madaxweynaha ma uusan soo bandhigin caddeyn. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa dafiray wixii qalad ah.
Ku xadgudubka xukunka awooda ah ee ka dhanka ah Trump wuxuu sidoo kale ku eedeeyey inuu sii daayay ku dhawaad ​​400 milyan oo doolar kaalmada amniga Mareykanka uu siinayo Ukraine iyo inuu u suurta gasho kulan ka dhici doona Aqalka Cad Zelenskiy si uu ugu ogolaado inuu si fagaare ah ugu dhawaaqo baaritaanada Biden iyo wiilkiisa Hunter, oo ku jiray guddiga. shirkad gaaska Yukreeniyaan ah.
Trump ayaa sidoo kale ka codsaday Ukraine in ay baaraan aragti fikradeed oo qalqal galisay in Ukraine.
Eedaynta xayiraadda ka dhanka ah Trump waxay salka ku haysaa tilmaamooyinkiisa saraakiisha hadda jira iyo kuwii hore ee maamulka sida Xoghayaha Arimaha Dibadda Mike Pompeo inaysan iskaashi la yeelan baaritaanka baaritaanka, xitaa haddii taasi ay la macno tahay in la diidayo maxkamadaynta.
Sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in aqalka uu qorsheynayo inuu qabto dood ku saabsan afgembi maalinta arbacada ee soo socota ka hor inta aan loo codeynin in la eryo Trump iyo in loo diro maxkamad.
Trump iyo Republicans-ka ayaa sheegaya in madaxwaynuhu aanu ku khaldanayn wicitaankiisii ​​Zelenskiy, isla markaana aysan jirin wax caddeymo toos ah oo uu ka leexiyay caawinaad ama kulankiisii ​​White House. Dimuqraadiyiinta ayaa ka horyimid taas iyagoo dhahaya inuu Trump joojiyay kaaliyeyaashii marag furaha.
Isagoo tilmaamaya walaac la’aanta maalgashadayaasha ee qalalaasaha siyaasadeed, ayaa saamiyada Mareykanka ay ku gaareen heerar rikoor cusub oo jimcihii iyagoo rajo ka qaba heshiis ganacsi oo macquul ah oo dhexmara Shiinaha iyo Mareykanka.
Markii guddiga ay codeynayeen, Shiinaha ayaa ku dhawaaqay horumar waxayna yiraahdeen Beijing waxay tirtiri doontaa canshuuraha la qorsheeyay in la dhaqan geliyo, taas oo ku riixeysa Celceliska Warshadaha Dow Jones 0.38%. Trump wuxuu ku raacay bogiisa Twitter-ka in heshiis ganacsi la gaarey. Saamiyada ayaa markii dambe ka tanaasulay qaar ka mid ah faa’iidooyinka laakiin waxay kusii dhowaadeen heerarka rikoorka.
Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka ee xilka laga qaado. Xisbiga Dimuqraadiga Bill Clinton waxaa loo xukumay sanadkii 1998 inuu been sheegay inuu xiriir galmo la leeyahay mid ka mid ah shaqaalaha Aqalka Cad, laakiin waa laga siidaayay aqalka senate-ka. Madaxweynaha Dimuqraadiga ah Andrew Johnson ayaa la qabtay 1868 laakiin aan lagu xukumin Guurtida.
Madaxweynaha jamhuuriga Richard Nixon ayaa is casilay 1974 ka hor inta aan laga qaadin ka dib ku lug lahaanshihiisii ​​fadeexada Watergate.
Trump ayaa u ordaya dib u doorashada 2020, oo ah tartan la filayo inuu noqdo mid qadhaadh, qaybna ka qaadan doona murashaxnimada dimuqraadiga ee la dooran doono sannadka soo socda.
Baadhitaanka eedaha af-duubka ayaa la bilaabay bishii Sebtember ka dib cabasho muuqata
Previous articleKhilaaf Cusub oo ka curtay Waaxda Dhalinyarada ee Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Puntland.
Next articlePuntland oo dagaal iclaamisay, DFS oo diidan dagaalkaas & Dhabarjab ay la kulantay Puntland.